Sucuudiga oo dil ku xukumay haweenay dishay gabadh u shaqaynaysay | Berberanews.com
Home WARARKA Sucuudiga oo dil ku xukumay haweenay dishay gabadh u shaqaynaysay
Sucuudiga oo dil ku xukumay haweenay dishay gabadh u shaqaynaysay
Saudi(Berberanews)-Maxkamad ku taal Sacuudi Carabiya ayaa xukun dil ah ku riday haweeney Sucuudi ah dilkii ay u gaysatay gabadh yar oo shaqaale u ahayd, una dhalatay Bangaladhesh.
kooxaha u dooda xuquuqda insaanka ayaa ku sheegay inay ahayd tusaale naadir ah in loo shaqeeye lagu helay dambi ah inuu ku xadgudbay shaqaale muhaajiriin ah oo ku sugan waddanka Bariga Dhexe la xukumo.
Ayesha al-Jizani waxaa Axadii ay maxkamadu ku xukuntay dil toogasho ah dilkii Abiron Begum bishii March 2019, labo sano kadib markii Begum ay tagtay wadamada khaliijka si ay u raadiso shaqo ka fiican mushaharkeeda, sarkaal dowlada Bangladesh ka tirsan ayaa yidhi.
Haweenka Bangladesh ayaa ka sheekeeyay sheekooyinka xadgudubka ee ka dhacay Sacuudi Carabiya.
Ehelada Begum waxay ku booriyeen dowlada Bangaladheesh inay talaabo ka qaado dilaaliinta “siray” Begum, oo 40 jir ah inay qabtaan shaqada Sacuudi Carabiya afar sano ka hor. “Waxay rabtay inay tagto dibedda si ay lacag badan u hesho si ay ugu bixiso waalidkeed oo da ‘ah,” Ayub Ali, seediga Begum, ayaa u sheegay Thomson Reuters Foundation.
Waxay bilaabeen inay jidhdilaan iyada laba toddobaad ka dib markay tagtay. Way na soo wici jirtay oo ay ooyi jirtay… waxaan ka codsannay dillaaliinta halkan inay soo celiyaan, laakiin cidina nama dhageysan.
Ninkeeda Jizani ayaa jeelka loo taxaabay mudo sadex sano ah kadib markii uu ku guul dareystay inuu ka caawiyo Begum helitaanka daweynta iyo sameynta shaqadeeda meel ka baxsan guriga qoyska, sida uu xaqiijiyay Ahmed Munirus Saleheen, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan wasaarada dibada ee Bangladesh.
Dadka u ololeeya ayaa sheegay in xukunka maxkamadda Sacuudiga ee ka dhanka ah loo shaqeeyaha uu ahaa mid aan caadi ahayn.
Wasiirka arrimaha dibedda ee Bangladesh AK Abdul Momen ayaa soo dhoweeyay xukunka. “Waxaan ku ammaanayaa dowladda Sacuudi Carabiya sida ay u bixisay ciqaabtan dhifka ah ee ku dayashada mudan.”
Wasiirka ayaa sidoo kale ku booriyay dowlada Sacuudiga in ay baadhi kiisaska kale ee tacadiyada iyo jirdilka loo geysto shaqaalaha guryaha ka shaqeeya ee ka yimid Bangladesh.
In ka badan 300,000 oo haween ah oo u dhashey dalka Bangaladesh ayaa u safrey Sacuudi Carabiya ilaa 1991 laakiin qaar badan oo ka mid ahi waxay la soo noqdeen sheekooyin xadgudub iyo dhiig-miirasho.
Sida laga soo xigtay Human Rights Watch (HRW) loo shaqeeyayaashu waxay la wareegaan baasaboorada, mushaharka ayay ka celiyaan waxayna ku qasbaan muhaajiriinta inay ka shaqeeyaan iyaga oo aan rabin. Shaqaalaha ka taga loo shaqeeyaha iyaga oo aan ogolaansho ka haysan waxaa lagu soo oogi karaa “baxsad” waxayna la kulmi doonaan xabsi iyo masaafurin, HRW ayaa tidhi.
Shantii sano ee la soo dhaafay, ku dhowaad 70 haween ah oo u dhashay Bangladesh ayaa ku dhintay Saudi Arabia, in ka badan 50 ka mid ah ayaa isdilay. Bangladesh waa mid ka mid ah dalalka dhoofka ugu badan adduunka waxayna aad ugu tiirsan tahay lacagaha ay u diraan eheladooda.
Previous articleEthiopia’s Tigray crisis: ‘I lost my hand when a soldier tried to rape me’
Next articleSirdoonka Iran iyo Israel oo foodda isku daray Buuraha Golon